‘हटस्पट’ काठमाडौं : १०८ जनाको मृत्यु, ४१ प्रतिशत संक्रमित घरमै
नेपाल लाइभ आइतबार, कात्तिक २, २०७७, १०:०५
काठमाडौं–काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण लगातार बढिरहेको छ। दैनिक थपिने संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौंका हुन थालेका छन्। अहिले उपत्यकामा प्रत्येक दिन २ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन्। यो हप्ता लगातार उच्च विन्दुमा काठमाडौमा संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका संक्रमितको करिब ७० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा भेटिन थालेका हुन्। काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या ४३ हजार २ सय ६५ छ।
तीमध्ये महानगरपालिकामा मात्र १८ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन्। महानगरमा असोज २९ गतेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १८ हजार ३ सय २० पुगेको छ। ३ सय जति पहिचान नखुलेका संक्रमित छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या १०८ पुगेको छ। महानगरका सवै वडामा संक्रमित संख्या एक सयभन्दा माथि पुग्न लागेको छ। सवै वडाका संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्।
महानगरका सबै वडामा संक्रमण फैलिइसकेको छ। महानगरको स्वास्थ्य शाखाले उपलव्ध गराएको तथ्यांअनुसार होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने अस्पताल र संस्थागत आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या घटिरहेको छ। संक्रमितमध्ये ७ हजार ४ सय ६५ जना होम आइसोलेसनमा छन्। यो कुल संक्रमितको ४१ प्रतिशत हो ।
यस्तै, अस्पतालमा ६ सय ६२ जना संक्रमित छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा ५ सय ४७ जना रहेको महानगरको सहरी स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
हालसम्म महानगरमा ९ हजार ५ सय जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। महानगरले २८ हजार ६ सय ५४ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको छ। तीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ३५सय ३९ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ।
काठमाडौं महानगरका २७ वटा वडामा २ सयभन्दा बढी संक्रमित छन्। सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १५ स्वयम्भुमा छन्। स्वयम्भुमा १४ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ९ जनाको मृत्यु भएको छ। सँगै रहेको वडा नं १६ बालाजुमा १४ सय ४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यहाँ ७ जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् ।
२०० भन्दा धेरै संक्रमित भएका हटस्पट वडाहरु, कहाँ, कति?(असोज २९सम्मको)
वडा नं १ नक्साल ३४४, मृत्यु १
वडा न. २ लाजिम्पाट २३०, मृत्यु ३
वडा नं ३ महारागञ्ज ९३३, मृत्यु २
वडा नं ४ धुम्वाराही ७०२, मृत्यु ९
वडा न. ५ हाँडीगाउँ ३६४, मृत्यु ६
वडा नं ६ बौद्ध ५७७, मृत्यु ६
वडा नं ७ मित्रपार्क ७१६, मृत्यु ८
वडा नं ८ जयवागेश्वरी ३७७, मृत्यु ३
वडा नं ९ गौशाला ७९३, मृत्यु १
वडा नं १० बानेश्बर ७५४ , मृत्यु ५
वडा नं ११ त्रिपुरेश्वर ७४२ , मृत्यु ५
वडा नं १२ टेकु २७६ , मृत्यु ३
वडा नं १३ कालिमाटी ८७३, मृत्यु ४
वडा नं १४ कलंकी १०८८, मृत्यु ४
वडा नं १५ स्वायम्भु १४३८, मृत्यु ९
वडा नं १६ बालाजु १४४०, मृत्यु ७
वडा नं १७ खुसीबुँ ४३२, मृत्यु २
वडा नं २० भीमसेनस्थान २१३, मृत्यु ४
वडा नं २१ लगन २०६, मृत्यु ३
वडा नं २५ नःघल २५१, मृत्यु ४
वडा नं २६ लैनचौर ७३४, मृत्यु १
वडा नं २७ इनबहाल ४०४, मृत्यु ४
वडा नं २८ बागवजार ६०७, मृत्यु १
वडा नं २९ डिल्लीबजार ६०३ , मृत्यु ०
वडा नं ३० ज्ञानेश्वर ३४७, मृत्यु २
वडा नं ३१ शान्तिनगर ६९० , मृत्यु २
वडा नं ३२ कोटेश्वर १०९० , मृत्यु ३
कुन वडामा कति संक्रमित ? (असोज २९ गतेसम्मको तथ्यांकका आधारमा )
वडा नं ९ गौशाला७९३, मृत्यु १
वडा नं १० बानेश्बर ७५४, मृत्यु ५
वडा नं ११ त्रिपुरेश्वर ७४२, मृत्यु ५
वडा नं १२ टेकु २७६, मृत्यु ३
वडा नं १८ नरदेवी १३७, मृत्यु ०
वडा नं १९ कंकेश्वरी १२६, मृत्यु १
वडा नं २२ संकटा १८०, मृत्यु २
वडा नं २३ ओमबहाल १९६, मृत्यु ३
वडा नं २४ मखन १२२, मृत्यु ०
वडा नं ३१ शान्तिनगर ६९०, मृत्यु २
वडा नं ३२ कोटेश्वर १०९०, मृत्यु ३
कूल संक्रमित १८३२०
होम आइसोलेनमा ७४६५
संस्थागत आइसोलेनमा ५४७
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ २८६५४